Top 2 Siyaabaha dejinta Xiriirada ka Gmail si iPhone
Ma suroobi karaa waddo fudud si ay u gudbiyaan xiriirada Gmail si iPhone? Waxaan leeyahay ka badan 200 oo xiriir ee Gmail. Waxaan isku dayay wax kasta oo ay u hagaagsan xiriirada Gmail la iPhone, laakiin ku guuldareystay. Walba oo soo jeedinaya?
Haddii aad dhoofiyo xiriirada iPhone in Gmail , aad rabto in laga yaabo in ay mar kale ku soo wareejiyo si aad iPhone marka aad lumiso qaar iyaga ka mid ah oo ku saabsan iPhone. Waxa ay u muuqataa wareejinta xiriirada Gmail si iPhone Waa arrin adag in dadka isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqada ah waa in ay tahay mid aad u fudud. Waxaad isticmaali kartaa Google nidaameed, CardDAV, ama qalab dhinac saddexaad si ay u gudbiyaan xiriirada ka Gmail si iPhone. In socda, 2 siyaabo fudud ayaa la soo bandhigay, waayo, waxaad si ay u gudbiyaan xiriirada Gmail si iPhone, rajeynaya adna aad jeclaan doonaa.
Bedelka Gmail Xiriirada inay iPhone via ah Tool
nidaameed Gmail Xiriirada inay iPhone Gacanta
Bedelka Gmail Xiriirada inay iPhone via Tool ah
Haddii aad raadinaya hab dheeraad ah oo toos ah si ay u gudbiyaan xiriirada ka Gmail si aad iPhone, waxaa laga yaabaa inaad xiiso isticmaalaya TunesGo Wondershare . Waxay kaa caawin doonaan inaad ku wareejiso xiriirada ee Gmail si iPhone. By isticmaalkiisa, aad marna ka walwalin doonaa oo ku saabsan ammaanka xiriirada aad, sababtoo ah ma waa adeeg daruur. Baro tallaabooyinka loogu sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Gmail si iPhone la TunesGo Wondershare
Tallaabada 1. dhoofinta Your Gmail Xiriir
Isticmaal web browser si ay u gasho in aad xisaabta Gmail. riix Gmail button. Riix Xiriirada ee liiska hoos-hoos u. Markaasay aad aragto oo dhammuna waa liiska xiriirada ee suuqa kala. Riix ah More button. Marka liiska la jiido hoos u muuqataa, guji dhoofinta . Si aad u isticmaasho barnaamijkan in aad nuqulka xiriir ka Gmail si iPhone, waa in aad doorato qaab vCard . Ka dib markii in, guji dhoofinta .
Tallaabada 2. Ku rakib TunesGo Wondershare
Si aad u isticmaasho TunesGo Wondershare, waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa inaad kala soo baxdo oo ku xidh. Riix hoos ku Download badhanka si ay u helaan xirmo rakibo oo ku xidh on your computer. Marka hore, download iyo rakibi TunesGo Wondershare on your computer. By gujinaya Download hoos ku qoran oo aad isla markiiba ka heli kartaa ay version maxkamad lacag la'aan ah. Markaas xiriiriyaan iPhone aad Windows PC.
Tallaabada 3. xiriirada Import ka Gmail si iPhone
Riix Xiriirada galeeysid ka tagay. Riix Import / dhoofinta iyo dooran Import xiriirada ka computer . In ay liiska hoos-hoos, dooro file ka vCard . Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, heli Contacts.vcf ku soo gudbin aad ku badbaadi Tallaabada 1 iyo waxa ay soo dhoofsadaan. Ka dib markii dhammaan xiriirada ka Gmail wareejiyo aad iPhone, waxaad isticmaali kartaa midowdo Xiriirada muuqan TunesGo Wondershare in ay ku milmaan xiriirada nuqul.
Isticmaalayaasha aan rabin in ay isticmaalaan wax qalab dhinac saddexaad isticmaali kartaa CardDAV ka si ay u gudbiyaan xiriirada Gmail si iPhone gacanta. Waa sahlan tahay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa. Si aad u isticmaasho sidan si hagaagsan xiriirada Gmail si iPhone, fadlan hubi in aad iPhone xiran yahay Wi-Fi iyo shabakadda mid deggan. Haddii kale, waxaad faill doonaa in ay soo dhoofsadaan xiriirada Gmail si iPhone. Bal aynu eegno sida loo sameeyo.
Tallaabada 1. Calan goobaha aad iPhone
Tuubada Settings icon aad iPhone> Dul cisbitaalka ikhtiyaar Mail, Xiriirada, Calenders u fur iyo saxaafadda dar Accounts ... Scroll ugu hooseysa ka dibna tubbada "Kale"
Tallaabada 2. Add account CardDAV
Riix dar CardDAV Account ee XIDHIIDH deegaanka. In uu furmo suuqa cusub poped, degaanka Server, nooca in Google.com ; User Name waa cinwaanka Gmail; Password waa sirta Gmail.
Tallaabada 3. Transfer Gmail Xiriirada inay iPhone
Ka dib markii gelinaya in macluumaadka, guji qabtay la dhammeeyo. Markaas marka aad Xiriirada furo, xiriirada Gmail la synced doonaa iPhone si toos ah.
Video Tutorial: Sidee si ay u gudbiyaan Gmail Xiriirada inay iPhone
Sida loo Copy Songs si iPhone aan Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan playlist ka iPhone in Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Mac si iPhone
Sida loo hagaagsan Music ka Lugood in iPod
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Gmail Xiriirada inay iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 5